Yintoni eyahlukileyo phakathi kweNzululwazi engqongqo kunye neSayensi yeSoft?
Ngokutsho kweBhunga leNzululwazi: "Inzululwazi kukusukela kunye nokusetyenziswa kolwazi nokuqonda kwehlabathi lezendalo kunye noluntu ngokulandela inkqubo echanekileyo ngokusekelwe kubungqina." IBhunga liyaqhubeka lichaza iScientific Method :
Injongo yokuqwalasela: Ukulinganisa kunye nedatha (mhlawumbi nangona kungenjalo imfuneko yokusebenzisa izibalo njengesixhobo)
Uvavanyo kunye / okanye ukujonga njengemilinganiselo yokuvavanya iingcinga
Ukuchithwa: ukuqiqa ukuseka imithetho epheleleyo okanye izigqibo ezivela kwiinyaniso okanye imizekelo
Ukuqinisekiswa nokuvavanya: ukunyanzeliswa okubalulekileyo, ukuphononongwa koontanga kunye novavanyo
Kwezinye iimeko, ukujonga ngokuchanekileyo kusetyenziswa inkqubo yesayensi yinkqubo eqhelekileyo engachazwa ngokulula ngabanye. Kwezinye iimeko, ukuqwalaselwa kwinjongo kunye nokuphindaphinda kunokuba nzima ukuba akunakwenzeka. Ngokubanzi, ezo zenzululwazi ezinokusetyenziswa ngokulula ngendlela yenzululwazi njengoko kuchaziwe ngasentla zibizwa ngokuthi "izazinzululwazi ezilukhuni," ngelixa iimeko ezinzima ezinjalo zibizwa ngokuthi "i-soft science".
Ziziphi iiScience Hard?
Iingcali ezihlola ukusetyenziswa kwehlabathi lezendalo zidla ngokuba zibizwa ngokuthi "izazinzululwazi ezinzima." Ezi zibizwa ngokuba yizendalo zesayensi. Ziquka:
Iingcali ezinzima ezifana nalezi zibandakanya ukuvavanya okulula ukusetha iziguquko ezilawulwayo kunye nokwenza imilinganiselo yemigomo.
Iziphumo zenzululwazi zenzululwazi ezinzima zingabelwa imathematika, kwaye izixhobo ezifanayo zeemathematika zisetyenziselwa ukulinganisa nokubala iziphumo. Umzekelo:
I-X ubuninzi be-Y amaminerari inokuvavanywa ngekhemikhali yeZ z, kunye nemiphumo echazwe ngokwezibalo. Inani elifanayo lezaminerali linokuvavanywa ngokuphindaphindiweyo kunye nekhemikhali efanayo kunye neziphumo ezifanayo.
Akufanele kubekho ukuhluka kwiphumo ngaphandle kokuba izinto ezisetyenziselwa ukuqhuba uvavanyo zitshintshile (umzekelo, isampuli yamaminerali okanye imichiza engcolileyo).
Ziziphi i-Sciences Soft?
Ngokuqhelekileyo, i-sciences ezithambileyo zijongene nezinto ezingapheliyo kwaye zihambelana nokufundiswa kwezenzo zabantu nezilwanyana, ukusebenzisana, iingcinga kunye neemvakalelo. I-sciences ezicwangcisiweyo zisebenzisa indlela yesayensi kwizinto ezinjalo ezingenakwenzeka, kodwa ngenxa yobume bezinto eziphilayo, akunakwenzeka ukuphinda ufunde "inzululwazi yenzululwazi" ukuzama ukuchaneka. Eminye imizekelo yezesayensi ezithambileyo ngezinye iinkcukacha ezibizwa ngokuba yizentlalo zentlalo, zibandakanya:
I-Archeology (kwezinye iindawo zayo)
Ngokukodwa kwizenzululwazi ezijongene nabantu, kunokuba nzima ukuhlukanisa zonke iinguqu ezinokuchaphazela umphumo. Kwezinye iimeko, ukulawula ukuguquguquka kunokutshintsha iziphumo! Ukubeka nje, kunzima ukuceba ukuhlola kwisayensi elula. Umzekelo:
Umphandi ucingisisa ukuba amantombazana anakho ngaphezu kwamakhwenkwe ukuba athathwe. Bakhetha iqela lamantombazana kunye nabafana kwiklasi ethile kwisikolo esithile kwaye balandela amava abo. Enyanisweni, bafumanisa ukuba abafana banokuxhatshazwa.
Uvavanyo olufanayo luphindwaphindwa ngokusetyenziswa kwenani elifanayo labantwana kunye neendlela ezifanayo kwisikolo esithile. Isiphumo esichaphazelekayo senzeka. Izizathu zohlukwano zilukhuni kunzima ukuzimisela, njengoko zinokuthintana nootitshala, abafundi ngabanye, i-socio-cosonics yesikolo kunye noluntu olukufutshane, njl.
Inzululwazi enzima kunye neSoft: Ngaphantsi
Amagama athi "inzululwazi enzima" kunye "nesayensi elula" isetyenziswe kangangoko kunokuba ayedla, ngenxa yokuba isigama esingaqondwanga kakuhle kwaye ngenxa yoko siyaqhatha. Abantu babona "nzima" ukuthetha "nzima kunokuba" kunokuba kunzima kakhulu ukucinga kunye nokutolika ukulinga kwizinto ezibizwa ngokuba yi-science yesicatshulwa kunezesayensi ezinzima. Ukwahlula phakathi kwezi zimbini zenzululwazi ngumcimbi wendlela onokumisela ngayo, ukuvavanya kwaye wamukele okanye uyayinqanda ingcamango.
Kwihlabathi lanamhlanje, ubunzima bobunzima abuhambelani nokuqeqeshwa kunokuba ngumbuzo othile, ngoko omnye unokuthi "inzululwazi" kunye "nesayensi elula" ayiphelelwe yisikhathi.
Iingxaki ezinhlanu ezinkulu kwiFiziki yeTheory
Ngaba i-Ice iyancibilika ngokukhawuleza kumanzi okanye emoyeni?
IHanover College Admissions
Uluhlu lokuFunda lweKlabhu yeNcwadi
ULisa Ferris - Isifama kunye nesisithulu
10 Iingcebiso zoKhuseleko zeKholeji
Isatifiketi seNtlawulo zeElement
Isakhiwo sokwakhiwa kwezivakalisi kunye neefositives